Izindaba - Ungawukhetha Kanjani Umshini Wakho Wokucindezela Ukushisa?
Uyini umshini wokucindezela ukushisa?
Umshini wokucindezela ukushisa (noma “umshini wokudlulisa ukushisa”) udlulisela amaphethini noma ukwakheka kwezinto ezifana nezikibha, amapayipi egundane, amafulegi, izikhwama, amagogolo, izigqoko, njll ngesikhathi, izinga lokushisa, nengcindezi. Umshini wokucindezela ukushisa oyisisekelo unebhokisi lokulawula ukushisa elilula, kanti umshini wokucindezela ukushisa onamandla ngokwengeziwe unomsebenzi wokulawula wedijithali ongagcina isikhathi, izinga lokushisa kanye nengcindezi. Ngaphandle kokukhethwa kukho kokusebenza komshini wokushisa umshini wokushisa, eminye imishini yokushisa ukushisa nayo inikela ngeminye imisebenzi efana ne-othomathikhi, ukucindezela okuzenzakalelayo, njll., Engahlangabezana kangcono nohlelo lwakho oluthile. Esinye isici okufanele usicabangele ukuthi usebenzise umshini wokudlulisa ukushisa okuzenzakalelayo womoya noma umshini wamagnetic semi-othomathikhi wokudlulisa ukushisa ukonga isikhathi namandla. Njengoba wazi, kunezinqumo eziningi okufanele uzenze lapho ukhetha umshini wokucindezela ukushisa, futhi inhloso yethu ukuphendula yonke le mibuzo kulo mhlahlandlela womthengi onemininingwane!
Uhlobo luni lomshini wokudlulisa ukushisa ongahlangabezana nezidingo zami?
Umshini wokucindezela wokushisa oqondile oqondile
Okuvame kakhulu emakethe umshini wokudlulisa ukushisa oqondile oqondile, futhi okulula kakhulu ukusebenzela ama-novices.
Swing Away Heat Cindezela Umshini
Ngomshini wokudlulisa ukushisa, ungagxilisa izinto ezijiyile, futhi ingxenye ephezulu ingaguqula ukuvimbela ukusha ngesikhathi sokubekwa kwezinto, ukuze ukwazi ukusheshisa ukukhiqizwa, unciphise imfucuza, futhi usheshe ubekwe, uphephe futhi unembe kakhudlwana.
Kungani ukhetha iTale?
I-Yiwu Tale Machinery & Spare Parts Facoy ingumkhiqizi wemishini ye-sublimation kanye nezingxenye zokungcebeleka ezinezinsiza zokuhlola ezihlome kahle namandla amakhulu wezobuchwepheshe. Ngobubanzi obuhlukahlukene, ikhwalithi enhle, amanani entengo afanele nemiklamo yesitayela, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezimbonini eziningi. Imikhiqizo yethu eyinhloko iqukethe umshini wokudlulisa ukushisa kwe-T-shirt, umshini wokuphrinta wenguqu wedijithali ongu-4-1, umshini wokudlulisa ukushisa wedijithali ongu-6-1, umshini wokudlulisa ukushisa wedijithali ongu-8-1, umshini wokuphrinta imagi, kanye nemug ehambisanayo, ikomishi le-sublimation, ukushintsha umbala mug, umculo mug, flash mug nephepha leyinki. Yonke imikhiqizo yaziwa kabanzi futhi ithenjiwe ngabasebenzisi futhi ingahlangabezana nezidingo zezomnotho nezenhlalo eziguqukayo ngokuqhubekayo. Siyakwamukela i-OEM, siyajabula ukunikela ngomshini wesampula ne-oda elincane liyamukeleka futhi.Siyakwamukela amakhasimende amasha namadala avela kuzo zonke izizinda zokuphila ukuze asithinte ukuze sibe nobudlelwano bebhizinisi besikhathi esizayo kanye nempumelelo efanayo!